Japan (TOKYO – OSAKA )Tour - Myanmar Interlink Services Co.,Ltd.
Japan (TOKYO – OSAKA) Tour
Tour Price: Tour only Package Deal =JPY129,500.- / pax for 15 pax group (twin/triple-sharing room) Price offer valid till 31st March 2018 Estimated airfare US$680/pax Tour Type: MIS/OT/02/TAS/17/jp (Outbound) Tour Duration:6Days5Nights
Visit Asakusa Kannon Temple which is the most famous, largest and also the oldest Buddhist temple of Tokyo
Visit The Great Buddha (or Daibutsu) of Kamakura is the second largest monumental Buddha in Japan
If weather permits you might have the chance to view Mount Fuji which is the highest mountain and the 13th UNESCO World Heritage Site in Japan
Visit Kiyomizu-dera , an independent Buddhist temple in eastern Kyoto and is part of the Historic Monuments of Ancient Kyoto UNESCO World Heritage It was also one of 20 finalists for the New7Wonders of the World.
Visit Todaiji temple where its Great Buddha Hall houses the world’s largest bronze statue of the Buddha, which isalisted UNESCO World Heritage Site as one of the “Historic Monuments of Ancient Nara“
Day 1: NRT APT / TOKYO (Lunch/Dinner)
We will depart from Yangon International Airport to Narita International Airport.
Yangon (19:10 am) – Hanoi (21:40 am) Vietnam Airline Flight No: VN956 (overnight)
(Layover time at Hanoi airport =3hours 45 minutes)
Hanoi (00:25 am) – Osaka Kansai (06:40 pm) Vietnam Airline Flight No: VN330
Itinerary Hotel Meal
NRT APT / TOKYO
AM: Asakusa Kannon, Nakamise, Skytree(photo)
PM: Shinjuku shopping -> Hotel Hotel : Candeo Hotels Ueno or Similar
*With Driver Cum Guide Service Basis* _ L D
နာရီတာ လေဆိပ်မှ ကြိုဆို၍ တိုကျိုမြို.၏ အကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရား Asakusa Kannon သို.ပို.ဆောင်ပေးမည်။ ထိုမှတဆင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှေးအကျဆုံးဈေးဝယ်စင်တာ (Nakamise)၊ နေရာများသို. သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးတာဝါအဆောက်အဦးဖြစ်သော ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြိူ.၏ (Tokyo Skytree)တာဝါ သို. ဓါတ်ပုံရိုက်ရန် ပို.ဆောင်ပေးပါမည်။
နေ.လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် တိုကျိုမြို.လယ် Shinjuku ရပ်ကွက်တွင် ဈေးဝယ်ထွက်ကြမည်။ ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို.ပို.ဆောင်ပေးပါမည်။
Day 2: TOKYO / FUJI (Breakfast/Lunch/Dinner)
TOKYO / FUJI
AM: Kamakura Big Buddha ->Lake Ashi Cruise(10min)
PM: Owakudani (exclude ropeway)->Gotemba Outlet -> Hotel Hotel : Sun Plaza Yamanakako or similar
*With Driver Cum Guide Service Basis*
*Dinner Buffet at Hotel* B L D
ဟိုတယ်မှ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဒုတိယအမြင့်ဆုံးကြေးဘုရားဖြစ်ပြီး ၁၂၅၂ခုနှစ်က သွန်းလောင်းခဲ့သော The Great Buddha of Kamakura သို.သွားရောက်ဖူးမျှော်မည်။ ထိုနောက် တိုကျိုနှင့်ကျိုတိုမြို.ကြားရှိ Mount Hakone မီးတောင်ဟောင်း ဂျိုင့်ဝှမ်းနံဘေး၌ တည်ရှိသော Lake Ashi ရေကန်သို.သွားရောက်၍ လှေအပျော်စီးကြမည်(၁၀ မိနစ်ခန်.)။
နေ.လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် နေသာပါက အဆိုပါ မီးတောင်ဟောင်း၏ Owakudani ၀န်းကျင်၌ မီးတောင်ဟောင်း၏ အခိုးအငွေ.များနှင့် Mount Fuji တောင်၏ခမ်းနားထယ်ဝါသော ရှုခင်းများကို ရှုမြင် လေ့လာ နိုင်ပါသည်။ ထိုမှတဆင့် Mount Fuji တောင်အနီး Gotemba ဒေသ ထွက်ကုန်များ ရောင်းချသည့် ကုန်တိုက်သို. သွားရောက်ပြီးနောက် ဟိုတယ်ကို ပြန်ပါမည်။
Day 3: FUJI / NAGOYA (Breakfast/Lunch/Dinner)
FUJI / NAGOYA
AM: Mt.Fuji 5th station(if weather permitted) or Fuji Visitor Center
PM: Bullet Train(1stop) ->Sakae shopping -> Hotel Hotel : Nagoya Tokyu REI or Similar
*With Driver Cum Guide Service Basis* B L D
နံနက်ပိုင်းတွင် နေသာပါက Mt. Fuji ရေခဲနှင်းတောင်၏ သာယာလှပသော ရှုခင်းများ အနီးကပ် မြင်တွေ.နိုင်ရန် Mt. Fuji 5th station တောင်တက်စခန်းသို. သွားရောက်လေ့လာမည်။
ထိုမှတဆင့် နံမည်ကျော် ကျည်ဆံ အမြန်ရထားကို တစ်မှတ်တိုင်စီး၍ နာဂိုရာမြို.တွင် အကြီးဆုံး ဈေးဝယ်ကြသည့် Sakae shopping center သို. သွားရောက် လေ့လာပြီး ဟိုတယ်ကို ပြန်ပါမည်။
Day 4: NAGOYA / KYOTO / OSAKA (Breakfast/Lunch/Dinner)
NAGOYA / KYOTO / OSAKA
AM: Kiyomizu Temple ->Gion
PM: Golden pavilion ->Fishimi Inari Shrine ->Hotel Hotel : Plaza Osaka Hotel or Similar
ဟိုတယ်မှ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကျိုတိုမြို. အရှေ.ပိုင်းရှိ ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် စာရင်းဝင် Kiyomizu Temple ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရား(The temple is part of the Historic Monuments of Ancient Kyoto UNESCO World Heritage site.) သို.သွားရောက်ဖူးမျှော်မည်။ ပြီးနောက် ကျိုတိုမြို.၏ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဆုံး Geisha ကျက်စားရာ Gion Street လမ်း သို. သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။
နေ.လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကျိုတိုမြို.ရှိ ဇင်ဘာသာ (ဂျပန်ပြည်တွင် ထွန်းကားသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ) ကိုးကွယ်သည့် Kinkaku-ji (“Temple of the Golden Pavilion”) ဘုရား သို.သွားရောက်ဖူးမျှော်မည်။
ထိုမှတဆင့် Fishimi Inari Shrine စေတီ သို.သွားရောက်ဖူးမျှော်မည်။ ယင်းစေတီ၌ ဆုတောင်းမည့်သူများ သို.မဟုတ် ဆုတောင်းပြည့်သူများက လှူဒါန်းထားသော မုတ်ဦး (Torii) တစ်သောင်းကျော်ခန်. စီတန်း၍ တည်ဆောက်ထားသည်ကို လေ့လာတွေ.ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Day 5: NARA / OSAKA (Breakfast/Lunch/Dinner)
AM: Todaiji temple, Deer Park
PM: Osaka Castle(photo) ->Shinsaibashi ->Hotel Hotel : Plaza Osaka Hotel or Similar
နံနက်ပိုင်းတွင် Nara မြို.ရှိ ပန်းခြံ၌ ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် စာရင်းဝင် Todaiji Temple(The temple isalisted UNESCO World Heritage Site as one of the “Historic Monuments of Ancient Nara“) ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားကျောင်းပရ၀ဏ်အတွင်း ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကြေးသွန်းဘုရားကို သွားရောက် ဖူးမျှော်ကြပါမည်။ Nara မြို.ပန်းခြံ၌လည်း ဒရယ်များကို အစာကျွေးနိုင်ပါသည်။
နေ.ခင်းပိုင်းတွင် အိုဆာကာ မြို.ရှိ (၁၆)ရာစုကာလ ဂျပန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားများစည်းရုံး ညီညွတ်ရေးတွင် အရေးပါ ထင်ရှား ခဲ့သော Osaka Castle ဂျပန်ရဲတိုက်ကို သွားရောက်လေ့လာပါမည်။ ထိုမှတဆင့် Shinsaibashi ဒေသရှိ အိုဆာကာ မြို. ၏ အဓိက ဈေးဝယ်ရာနေရာသို.သွားရောက် ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို.ပို.ဆောင်ပေးပါမည်။
Day 6: Osaka KIX APT/ Yangon DEP (Breakfast)
After breakfast at hotel, you will be transferred to Osaka Kansai International Airport and end your trip.
Osaka Kansai (10:30 am) – Hanoi (13:20) Vietnam Airline Flight No: VN331
(Layover time at Hanoi airport =3hours 25 minutes)
Hanoi (16:45 pm) – Yangon (18:10 pm) Vietnam Airline Flight No: VN957
Estimated airfare US$680 per pax
+ No FOC
JPY328,500.- / pax
JPY199,000.- / pax
JPY156,000.- / pax
JPY331,000.- / pax
JPY202,000.- / pax
JPY159,000.- / pax
JPY157,000.- / pax
JPY129,500.- / pax
JPY115,500.- / pax
JPY161,500.- / pax
JPY135,000.- / pax
JPY121,000.- / pax
+2FOC
JPY108,500.- / pax
JPY102,000.- / pax
JPY114,000.- / pax
JPY107,500.- / pax
*Air Fare Excluded / Based on One Coach (8:00-20:00)*
Prevailing exchange rate 1 USD = 107 yen
Single supplement JPY 6,600 per person per night
Child with Bed (Twin/Triple):Full Tour fare
Child without Bed: 50% of tour fare
FOC Policy As per stated
Tipping guideline: JPY 1,000 per pax per day (EXCLUDED)
Meal Conditions Lunch JPY 1500 & Dinner JPY 2000
A bottle water(150ml) per pax (EXCLUDED)
Room Condition Non-smoking Room and DBL room are just on request basis
Included : All Entrance fee, Bullet Train, Coach & tour with guide, Meals stated in itinerary, Hotel accommodation.
◆Tight date & Blackout date
*Saturday Night & 8th Oct, 2-3, 22 Nov(National Holidays)
Charge JPY2,200.- per pax per night (EXCLUDED)
TAS-WIFI (Rental Usage): JPY1,000 per day *14 pax (14 Lines) can use per device*
◆Cancellation Policy as follow:-
No charge 30 or more days prior to the starting date of the tour
20% of the tour fare If notice of cancellation is received by the Company 22 days to 29 days prior to the starting date of the tour
30% of the tour fare 21 days to 15 days prior to the starting date of the tour
70% of the tour fare 14 days prior to the starting date of the tour
100% of the tour fare7days before departure day basic.
NOTE: Tour Fare quoted base on Japanese Yen for twin / triple sharing basic.
Tour Fare Include Daily Coach And Guide Service Basis except wherever stated
Tour Fare quoted excluded: Air fare, Osaka castle admission fee, airport tax & gratuities.
Tour Fare quoted subject to change without prior notice.
Booking confirmation subject to room availability.
Full payment is required prior to the date before arrival.
Hotel name will be confirmed after we send the confirmation
We trust you will find our quotation satisfactory, and look forward to receiving your group booking.